सिरिन्ज आक्रमण दैनिक झनै बढ्न थाले ,, – Ranga Darpan
असार १५ , काठमान्डौ – राजधानीका अस्पातालमा सिरिन्ज आक्रामक भएका बिरामी झन् बढ्न थालेका छन्। केहि महिना यता राजधानीमा साँझ पख महिला हरुमा सिरिन्ज आक्रामक हुने गरेका छन् ।
गत शुक्रबार सिरिन्ज आक्रमणमा संलग्न भएको आरोपमा महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुले सन्तोष कार्कीलाई पक्राउ गरेर सार्वजानिक गर्यो । उनले युवतीमा आक्रमण गरेको भिडियो समेत सिसिटिभी फोटेजमा रेकर्ड देखियो।
प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान र बयान लिँदा सन्तोषले रमाईलोको लागि खोपको तर त्यो सिरिन्ज होईन ढलान गर्ने काँटी हो भने प्रहरी लगायत सबै अचम्म परे। तेती मात्र होइन कार्कीले आफुले चार जनामाथि काँटी खोपको पनि स्वीकार गरे।
तर पिडितले यो कुरा पत्याउन सकेनन ,बल्कि यो घटना दैनिक झन् बढ्दो देखिन थालेको छ। दैनिक ६ जना महिलाहरु आफूमाथि सिरिन्ज आक्रामक भयो भन्दै टेकु अस्पतालमा पुग्न थालेका छन्।
काभ्रे , कृतिपुर,असन लगायतका विभिन्न ठाँउमा सिरिन्ज आक्रमण भएको अस्पतालले जानकारी गरेको छ । कतिपएलाई एचआईभीविरुद्दको भ्याक्सिन दिईएको छ भने कतिपएलाई परामर्श गरेर फिर्ता गरेको टेकु अस्पतालका डाक्टर अनुप बास्तोला बताउँछन् ।
पक्राउ गरिएका कार्कीले त काँटी खोपेहोलान उनले चार जनामा काँटी खोपको स्वीकार गरे तर अरु ठाँउ ठाँउमा भयको आक्रमण त सिरिन्ज होला यसको जिम्मा कसले लिन्छ ।
डा. बास्तोलाका अनुसार तिखो वस्तुले घोचेको शंकास्पद केसमा ‘एआरटी’ चलाइएको छ दिनहु बिरामी बढ्नुले हामिलाई सोच्न झन् बाध्य बनाको छ । बोस्तालेले भने तर आफूहरु अन्यौलमा रहेको उनले सुनाए ।
‘एआरटी नचलाउँदा भोलि संक्रमण होला भन्ने डर हुन्छ । त्यसैले केसको प्रकृति र बिरामीको ‘साइकोलोजी’ बुझेर काम गर्नु परेको छ’ उनले भने, ‘प्रहरी अनुसन्धानले निश्कर्ष ननिकाल्दासम्म त्रास हुने नै भयो ।
सिरिन्ज खोपेर भाग्यो भन्ने महिला धेरै आए तर खोप्ने ब्याक्ति देखे भन्ने कसैले भन्न सकेको छैन । अर्का चिकित्सक शेरबहादुर पुन भन्छन डा. पुन भन्छन्, ‘हामी मनोवैज्ञानिक डरमात्रै हो भनेर चुप बस्न पनि सक्दैनौं । सिरिन्ज आक्रमण नै हो भनेर ठोकुवा गर्न पनि सक्दैनौं ।
मनोवैज्ञानिक डर बोकेर अस्पताल आउनेहरु बढेका छन् तर सबै भन्दा बढी सिरिन्ज आक्रमण हानेर आउने गरेका छन् । पुन भन्छन, घटना झनै बढ्नु भनेको सबै आक्रमणकारी पक्राउ नपर्नु पनि हो उनले अगाडी भने ।
प्रहरीले भने आक्रमणकारी तिब्र रुपमा खोजीकार्य गरेको छ । सादा पोसाकमा पनि प्रहरीपरिचालन गरेको र सीसीटीभी मोनिटरिङमा पनि जोड दिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विश्वराज पोखरेलले बताए । उनि भन्छन यो घटना गम्भीर छ हामि घटनाको दोषी पत्ता लगाउन लागि परेका छौ।